RealmCraft with Skins Export to Minecraft 4.1.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.1.7 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း RealmCraft with Skins Export to Minecraft
RealmCraft with Skins Export to Minecraft ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
★★★★★အခမဲ့ Sandbox ဂိမ်း★★★★★
Craft & Build & Destroy & အသက်ရှင်လွတ်မြောက်
RealmCraft 3D လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အသင်္ချေကမ္ဘာနှင့်တစ်ဦး sandbox 'ဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
*** GAME အင်္ဂါရပ်များ ***
• 3D Sandbox အခမဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဂိမ်း;
အွန်လိုင်းအစစ်အမှန်လူတို့နှင့်အတူ Chat ရန်• multiplayer beta ကို mode ကို;
• RPG element တွေကို;
• RPG element တွေကိုဂိမ်းထဲမှာကမ္ဘာကြီး Explore;
•ပင်မ Craft နှင့်ဖျက်ဆီးအရာအားလုံး;
•အမြှုပ်မိုင်းသို့နက်ရှိုင်း သွား. ,
•အခမဲ့သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းသတ်မှတ်ထားဖို့ကို Creative mode ကို။
Create နှင့်လုပ်ကွက်အမျိုးမျိုးဆိတ်ကွယ်ရာကိုချိုးဖျက်, ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်း, အရင်းအမြစ်များကိုစုသိမ်း, Kraft လက်နက်များ, အမိုးအကာတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါ။
RealmCraft လူကြီးများနှင့်လေးတွေများအတွက်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာဘို့သင့်ကိုဖျော်ဖြေကာမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကစားခြင်းများအတွက်အွန်လိုင်းကစားသူအများအပြား beta ကို mode ကို!
: RealmCraft multiplayer beta ကို mode ကိုခုနှစ်တွင်သင်အွန်လိုင်းအစစ်အမှန်လူတို့နှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်
•အစစ်အမှန်ချက်တင်ဂိမ်း features တွေသို့မဟုတ်ဂိမ်း Quest များအတွက်ဆွေးနွေး;
•ပေးပါ၎င်းတို့၏အမိုးအကာ / အိမ်များ / မြို့များတည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်အွန်လိုင်းလူတွေကိုအကြံပေး!
EPIC ရှင်သန်မှု / action ကိုချိတ်ဆက်ပါသို့မဟုတ်စူးစမ်း & စွန့်စားမှု။
ဒီဂိမ်းနှစ်ခု Modes သာကမ်းလှမ်း - Survival နဲ့ ကို Creative sandbox '။
► ကို Survival mode ကိုခုနှစ်တွင် သည်ကစားသမားကို item သောင်မတင်, အမဲလိုက်အရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်းအဆောက်အဦးများဆောက်လုပ်ရန်, ရန်သူများကိုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ရှင်သန်နှင့်အကြံထမြောက်ရသောအဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းဖို့ရှိသည်။
► ကိုကို Creative mode ကိုခုနှစ်တွင် ကိုသင်၏အိပ်မက်မက်နိုင်အရှိဆုံးပီပီအဆောက်အဦများတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ကခိုင်ခိုင်လုံလုံကိုချိုးဖောက်အာရုံစိုက်ပါ။
★★★★★ Explore နှင့် Create ★★★★★
Build, delete, အပြောင်းအရွေ့, ပျံခုန်ခြင်းနှင့်သတ္တုတွင်းအခမဲ့ sandbox 'ဂိမ်းအတွက်ယာဉ်။
သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကစားခြင်းများအတွက်အွန်လိုင်းကစားသူအများအပြား beta ကို mode ကို!
Follow RealmCraft အပေါ်:
RealmCraft တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး Mojang လျှောက်လွှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဂိမ်း Minecraft Pocket Edition ကိုနဲ့ဆက်စပ်သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်မထားပါ။ Minecraft Mojang ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည်နှင့်ကထောက်ခံသို့မဟုတ် RealmCraft ဂိမ်းရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သို့မဟုတ်၎င်း၏လိုင်စင်ရနှင့်အတူဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပါ။
RealmCraft with Skins Export to Minecraft အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
RealmCraft with Skins Export to Minecraft အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
RealmCraft with Skins Export to Minecraft အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
RealmCraft with Skins Export to Minecraft အား အခ်က္ျပပါ
RealmCraft with Skins Export to Minecraft ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း RealmCraft with Skins Export to Minecraft အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.1.7
ထုတ်လုပ်သူ Tellurion Mobile
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.tellurionmobile.com/privacy-policy
App Name: RealmCraft with Skins Export to Minecraft
Release date: 2019-09-08 17:26:27
လက်မှတ် SHA1: A4:85:FB:90:90:7D:44:51:F1:01:0C:C3:E7:E5:7A:D6:DC:7F:B5:07
အဖွဲ့အစည်း (O): Tellurion mobile
RealmCraft with Skins Export to Minecraft APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ